युवती निन्द्रामा परेपछि प्रेमीकी आमाले आएर गर्थिन यस्तो हर्कत, गोप्य रेकर्ड भिडियोले हैरान ! – Sandes Post
April 5, 2022 1637
काठमाडौ । एउटी केटी ध्वनि रेकर्डिङ मेसिन अन गरेर सुतिरहेकी हुन्छिन् । ताकि उसको घुरेको आवाज सुन्न सकियोस्। तर जब उनले रेकर्डिङ सुन्छिन्, त्यहाँबाट अनौठो आवाज सुनिन्छ। केटीले सोच्छिन् कि कोठामा भू’त छ।
सत्य पत्ता लगाउन, उनले कोठामा क्यामेरा जडान गरिन्। पछि रेकर्ड गरिएको भिडियो देख्दा उनी छक्क परिन् ।युवतीले यो घटनाका धेरै भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा पनि शेयर गरेकी छिन् । सुरुमा उसलाई लाग्यो कि आफ्नो कोठामा भूत छ । त्यस पछि उनले गति पत्ता लगाउने क्यामेरा जडान गरिन् ।
युवतीले टिकटक भिडियोमा यसबारे विस्तृत जानकारी दिएकी छिन् । भिडियोमा उनी सुतेकी थिइन् । त्यसपछि अचानक एक महिला उनको छेउमा उभिरहेकी छिन् । उनले केही डरलाग्दो कुराहरू भनिरहेकी छिन्। टिकटक भिडियोमा उनी भन्छिन्– मैले एउटा एप डाउनलोड गरेकी छु जसले गर्दा मैले सुत्ने बेलामा घुरेको छु वा छैन भनेर थाहा पाउन सक्छु ?
र म त्यो आफै सुन्न सक्छु। तर मैले त्यो मेसिनबाट ड’रलाग्दो आवाज सुन्न पाएँ। जसमा उनी मेरो मृ’त्यु चाहन्छिन् भनिएको थियो ।मलाई लाग्यो मेरो कोठामा भू’त छ । तर उनी मेरो प्रेमीकी आमा पो रहिछन् । उनी मसँग आएपछि यी सबै ड’रलाग्दो काम गर्थिन् । भन्दै भिडियो नै बाहिर ल्याएकी छिन् ।
१० लाख मानिसले भिडियो हेरे युवतीको यो भिडियो टिकटकमा भाइरल भएको छ । यसमा उनले १० लाखभन्दा बढी लाइक र हजारौं कमेन्ट पाएकी छन् । त्यसपछि युवतीले अर्को भिडियो बनाइन् र त्यसमा विस्तृत रूपमा बताएकी छन् ।
दोस्रो भिडियोमा केटीले भनिन्– म एक दिन टिकटक स्क्रोल गर्दै थिएँ । त्यही बीचमा मैले एउटा विज्ञापन देखेँ। त्यसमा लेखिएको थियो– राती सुत्दा आफ्नो चाल रेकर्ड गर्नुहोस् र आफ्नो घुरेको कुरा सुन्नुहोस्। केटीले थप भनिन् त्यसैले म यो उत्पादन प्रयोग गर्न चाहे ।
तर यसले मलाई मेरो घुर्ने आवाज सुन्न दिन सकेन। बरु, मैले केही अनौठो आवाज सुन्न थालें। मेरो कानमा कोही गुनगुनाए जस्तै ।लगातार तीन दिनसम्म यस्तो भयो । अनि घरमा भूत छ जस्तो लाग्यो। किनकी सासुले सधैं राम्रोसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो । र आज पनि त्यस्तै छ। तर म निदाएपछि के हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन ।
केटीले भनिन्– तर अचानक एक रात मेरो कोठाभित्र सासू आउँदै गरेको देखेँ । उसले केहि खोजिरहेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । तर यथार्थमा त्यस्तो थिएन । उनले मेरो मृ’त्युको कामना गर्दै अनेकौँ पुकार गरिरहेको सुने । त्यो भिडियो रेकर्ड भएको छ यो देखेर म चकित भए ।
Prev७ बर्षीय छोरालाई एक्लै छोडेर जापान मै अस्ताईन २६ वर्षीय लक्ष्मी
Nextपिडित भाउजुको बयान : मलाई श्रीमानले मात्रै हैन देवरले पनि छोड्दैनन्